Anisan'ny fihinan'ny akoho amam-borona avy amin'ny sakafo McDonald's BTS manimba internet, mahazo $ 50k amin'ny tolotra eBay - Pop-Kolontsaina
Anisan'ny fihinan'ny akoho amam-borona avy amin'ny sakafo McDonald's BTS manimba internet, mahazo $ 50k amin'ny tolotra eBay
Nugget akoho hita tao amin'ny McDonald's Bombo Combo Meal dia nalaza noho ny fijeriny ny toetran'ny Among Us, ary amin'izao fotoana izao dia manana fangatahana $ 51000 mahery amin'ny eBay izy.
Tamin'ny 26 Mey, ny debutan'i McDonald no nandrasana indrindra Sakafo Combo BTS izay ahitana akoho akoho 10 sombin-tsakafo McNugget misy paty antonony sy Coke. Ahitana saosy atsoboka roa vaovao koa, sakay mamy sy cajun, izay aingam-panahy avy amin'ny fomba fahandro avy any Korea Atsimo.
Faly ny mpankafy BTS ary lasa toerana mafana ho an'ny ARMY manerantany ny McDonald's.
sarotra ny mahita lehilahy tsara
Vakio ihany koa: 5 amin'ny TikToks malaza an'i Addison Rae
Chicken Nugget miendrika toetran'ny Among Us
Hitan'ny mpivarotra ilay akoho amam-borona tao amin'ny BTS Combo Meal izay mitovy tanteraka amin'ny ekipa ekipa iray avy amin'ny lalao multiplayer malaza Among Us.
Teo aminay no nipoaka ny lazany tamin'ny taona 2020, niaraka tamin'ny influencer sy streamer avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao nialokaloka ireo tarehin-tongotra roa mahafatifaty sy mora ekena. Nahafinaritra ny olona ny maminavina hoe iza ilay 'mpisandoka' hatramin'ny faran'ny taona 2020, rehefa maty ny hype noho ny fiheverana momba ny hacking.
Chicken Nugget toa ny toetran'ny Among Us manimba ny Internet (Sary amin'ny alàlan'ny Google)
Vakio ihany koa: Namaly ny fiampangana an'i Mishka Silva sy Tori May i Mads Lewis
Tolo-bidin'ny Chicken Nugget amin'ny eBay
Tamin'ny fahita tsy fahita firy, nanapa-kevitra ny mpivarotra ny hahazo tombony amin'ilay zavatra hita tamin'ny alàlan'ny fametrahana tolotra ho azy amin'ny eBay. Na izany aza, dia nahagaga azy ireo fa ireo mpankafy ny lalao sy ny BTS dia nanapa-kevitra ny hifampiresaka amin'ny ady tolo-bidy, ary nampiakatra ny vola hitentina 50 000 dolara mahery.
Niakatra hatramin'ny 50 000 $ ny tolotra (Sary tamin'ny alàlan'ny eBay)
Ny tavy akoho dia manana tolotra 160 ankehitriny, miaraka amin'ny mpijery 900 mahery. Tapitra ny 3 jona ny tolotra. Halefa ao anaty sakaosy plastika ilay akoran'akoho.
Liana ny mpankafy ato aminay hahita hoe iza no handresy ny bidin'ny akoho amam-borona ary ho tompon'ity tsy fahita firy ity.
Vakio ihany koa: 'Nafana dia haingana be izao': Trisha Paytas, Tana Mongeau, ary ny fihetsika bebe kokoa tamin'ny adin'i Bryce Hall sy Austin McBroom nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety
Ampio izahay hanatsara ny fandrakofanay ny kolontsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra.
alice nalaina avy tany alice tany Wonderland
manao fahadisoana mitovy hatrany hatrany
maninona aho no be resaka
inona no holazaina rehefa miantso anao tsara tarehy ny sipanao
ny fomba hiatrehana ilay vehivavy hafa aorian'ny fisaraham-panambadiana